Forum serasera malagasy diso ny hoe:"basy atifi-kavana....." - Dinika forum.serasera.org
diso ny hoe:"basy atifi-kavana....."
Fitohizan'ny hafatra : diso ny hoe:"basy atifi-kavana....."
RKjeanclaude - 11/03/2017 13:47
diso ny hoe: " basy atifi-kavana, tsy asoko fa arangaranga". Tia havana ka na n'inona n'inona fifandirana, tsy miafara amin' ny fifamonoana izany. Ka ny tena izy dia"basy atifi-kaza ny ahy, tsy asoko fa arangaranga". Ny haza mantsy, lambo na vorona na hafa, na dia arangaranga aza ny basy ka atodika any aminy tsy fantany hoe hahafaty azy ka tsy ilaina afenina fa afaka atao miharihary tsara (=arangaranga). Na dia arangaranga aza tsy hitsoaka na handositra izy. Fa raha olona kosa dia fantany tsara fa hotifirina izy ka handositra na hiala ka tsy ho voa. Noho izany, tsy maintsy afenina fa tsy arangaranga raha te-hitifitra azy, na havana izy na tsia.
DotMG - 13/03/2017 09:11
Ialahy no diso be dia rehefa tsy mahay dia aleo mangina fa tsy mampiana-diso ry baina a! Voalohany aloha, tsy ohabolana antitra be io ohabolana io, fa ny nidiran'ny basy teto Madagasikara aza vao taonjato vitsivitsy, noho izany tsy maha-antitra an'io ohabolana io izany dia toy ny zaatra rehetra ihany, tsy mbola niova tamin'ilay heviny nandrafetana azy voalohany akory izy fa tena izay mihitsy no izy hatramin'izay : basy atifi-kavana. Ingahy izao no miezaka hitondra fampianaran-diso vaovao eto sy hanova ny marina.
Faharoa, mila misokatra kely ihany koa ny saina r'ingahy, fa tsy hoe rehefa basy akory dia ilay fitaovana mampiasa bala entina hamonoana na handratrana olona na haza iny ihany akory no atao hoe basy. Misy hevitra ambadika hafa ambaran'ny hoe basy sy ny hoe mitifitra, ary rehefa arafitr'ingahy izay hevitra hafa izay hoe BASY; ATIFITRA; HAVANA dia tokony ho azon'ingahy ilay tian'ny ohabolana hambara.
RKjeanclaude - 13/03/2017 20:53
valin-teny an-katezerana fotsiny no hamalianao. tsy misy misy fanazavana "rationnelle". misaotra anao anefa tompokolahy, fa na diso aza ny ahy tazoniko ihany satria aminao ihany izany fa tsy amiko. izaho rahateo tsy mpitifitra havana fa mankafy ireo mahay mitifutra haza. mandram-pitafa tompoko.
endriny - 18/03/2017 16:57
Ilay ange ry Ra-Jean tsy hoe tantara ankehitriny no nahatonga an'io ohabolana io e. Fa mba ivereno kely aloha ny tantara hoe iza moa no nifamono teto taloha: ny samy mpiray foko, ny samy mpiray firenena, dia ny frantsay sy ny Malagasy, dia ny samy Malagasy nahazo vatsy tamin'ny frantsay na ny anglisy.
Ary maro ny fifanafihan'ny samy mpiray firenena na mpiray faritra, izay samy mpihavana daholo.
RKjeanclaude - 21/03/2017 10:28
efa lany daty anie zany io ohabolana io e. Sady tsy dia nalaza loatra teo amin'ny tantara izany ambaranao izany. Ny nalaza dia ny sonegaly namono ny Gasy, na Gasy manoro ireo fiafenan'ireo mpanao fihetsiketsehana, Fa ny hoe nitifitra dia mbola tsy naheno aho. Fa mba diniho anie e, raha mbola nisy chasseur nanfina ny basiny rehefa izy hi-gueter ny hazany. Satria tsy hisy vorona mihitsy hahalala hoe hahafaty azy iny na dia nisy voan'ny bala aza ny namany hafa. Fa raha misy olona tsotra, tsy ao antin'ny tafika hitifitra olona hafa dia mazana afeniny foana ny basiny.
endriny - 21/03/2017 14:17
efa lany daty anie zany io ohabolana io e. Sady tsy dia nalaza loatra teo amin'ny tantara izany ambaranao izany.
1. Efa lany daty ny ohabolana: "Fa vazaha sy Malagasy ve no nifampitifitra tamin'ny 2009 sa samy Malagasy? Ary angaha tsy mpihavana indray akory ny samy Malagasy? Ary ilay mpamaky trano mitondra basy angaha Kaomaorianina?
Io anaranao Jean io izao no efa tokony lany daty fa efa hatramin'ny taona 0 no nisy jean. Tokony soloina hoe Jombilo io
2. Mampalahelo ilay Malagasy fa ny tantarany aza tsy hainy kanefa ny tantaran'ny Israeilita abosesika ao an-dohany atao tsianjery mihintsy
RKjeanclaude - 21/03/2017 19:21
Enao tsy dia mandinika sady tsy mahay mamaky teny loatra. Efa nambarako sady averiko hoe ny ao anaty tafika ihany no sahy mandranga basy n'aiza n'aiza eto an-tany. Sady hay ve ny havanareo ka dahalo sy jiolahy e. Zay kay no mahasaropiaro anao @io ohabolana io. azafady .
Raha ny anarako tianao ovaina indray dia reraka foana ianao hanaratsy an'io fa mandram-pialanao eto ambonin'y tany dia hahita Jean foana ianao. Sady aza atao mampalahelo raha sady mahay tantaran'ny Israely aho no mahay ny tantaran-tsika koa e. Raha tsy tadidy dia anotanio eto fa hatoroko tsara ianao.
endriny - 22/03/2017 05:31
Adala hono tompoko izay tsy tia ny azy. Ka izaho tsy hisavika ny tsy ahy. Ka na dahalo na jiolahy ny havako, havako foana ireo ka tsy ahamenatra ahy ny mitsangana eo ambaravaran'ny fonja mba hitsinjo azy.
DotMG - 22/03/2017 08:28
Efa saika tsy hamaly intsony aho satria hoy ny fitenenana hoe "Ny hendry ihany no anarina", nefa aleo mba miala nenina ihany sao mety misy fahendrena tavela kely ihany ao amintsika mpisera.
Taomiko kely isika hijery ity rohy iray ity : ohabolana basy, ao ambanimbany ao misy an'ireto :
Basy atifikavana ka arangaranga ihany. [Rajemisa 1985]
Ireo Rajemisa, Rinara, Samson ireo dia anaran'ny mpikaroka Malagasy, nanoratra boky, izay loharano nakan'ity sehatra ity ireo ohabolana ireo. Hita eo ihany koa ny taona namoahan'ireny mpikaroka ireny ny boky nosoratany. Miangavy am-panajana re, aza mihambo ho mahay noho ny mpikaroka telo samihafa fanta-daza ka handiso izay nosoratany satria tsy azonao tsara ny "lojika" ao anatin'ny ohabolana iray. Tena tsotra kokoa, ary tsy mahamenatra, ny miaiky hoe "tsy mazava amiko ny lojika ato amin'ity ohabolana anankiray ity fa sao dia mba mety ho toy izao aza no niaingan'io?
Fa ny fisehoana ho mpandinika sy mpandalina, miaraka amin'ny fanazavana anankiray, ka amoahana didy na fitsipika vaovao mandiso ny zavatra anankiray efa manana ny toerany eo amin'ny riba sy ny fomba amam-panao ary ny fomba fitenenana, raha atao tsy am-piheverana dia tena fanimbana tsotr'izao ny hasin'ny Teny Malagasy. Fa sady manakorontana ny sain'ny tsy te handinika izany, no mamery ny soatoavina izay mety tsy ho fantatsika taranaka taty aoriana.
RKjeanclaude - 22/03/2017 09:23
malahelo be ianao raha hilazako hoe tsy ireo olona ireo no namorona io ohabolana io. Ka mba mety ho diso koa izy. Fa aleo atao hoe marina ny anareo e. Rehefa tsy resy lahatra aho dia tsy mampiasa io ohabolana io fotsiny.
Misaotra betsaka fa hay ianao mba mahay manaja ihany, hita nisy fahendrena kely marina.
DotMG - 22/03/2017 18:02
Ary tsy dia tena mahay mamaky teny koa isika izany an, sa ilay mpampita hevitra no nandra be ka tsy azon'ny mpamaky ny hevitra aposaka? Satria mantsy tsy nisy nihevitra mihitsy teo hoe ireo olona ireo no namorona ilay ohabolana, fa dia hoe mpikaroka izy ireo.
Ny nataony dia mikaroka ny ohabolana fampiasan'ny besinimaro, mandrafitra azy ho boky mba tsy hahamora very na hampiova ireny soatoavina ireny. Tsy maninona fa mahay noho ry Rajemisa izany ny "mpikaroka" ankehitriny e!
Indray andro hono, nandeha mafy nitondra fiarakodia tao amin'ny 'sens unique' an'Ambohitsilazaina ity ranamana iray sady mihaino radio, no nandre fampilazana hoe "Aoka hitandrina izay mandeha amin'ny làlan'Ambohitsilazaina fa misy adala mandeha 'sens interdit' mirimorimo mafy. Dia hoy ilay ranamana namaly irery : Aty amin'ny alehako mihitsy izany, saingy tsy adala iray aza ireto fa tena am-polony mihitsy, fa ireto adala ireto kosa aloha sady tsy mandeha mafy izany no toa mitandrintandrina daholo
RKjeanclaude - 22/03/2017 19:42
azoko ihany ilay izy na dia izaho aza ilay mandeha sens unique. Hitondra marary maromaro hoany @ hopitaly aho mantsy dia mandeha sens unique, fa ireo marary koa no manondrana. Fa mietitreritra indray ho'aho izaho e: sao dia samy diso isika fa ny marina dia hoe: "basy atifi-kavana tsy asoko fa atsakabary"? Dia tokony tsy omena tsiny koa ireny polisy ireny fa mba manaporofo ohabolana!?....
DotMG - 23/03/2017 07:36
Tena tsara ny famoronantsika velona ankehitriny ohabolana momba ny trangam-piarahamonina toy ireny tao Antsakabary ireny. Rehefa lasa ohabolana mantsy ireny tantara ireny dia mipetraka tsy ho faty, anatra ho an'ny taranaka. Dia any aoriana ela any, hisy mpikaroka hamoha an'ilay tantara sy ny fanazavana hoe tranga toy izao hono no nahatonga an'io ohabolana io.
Tsara ihany koa anefa rehefa mamorona raha mba tena mamorona vaovao tanteraka fa tsy ny efa eo no ovaina kely.
"Hotohoton'Antsakabary, adin-dokotra no iantombohany, fa tanàna kila sy Anandra miongotra no vokany".
RKjeanclaude - 23/03/2017 08:37
le sens unique tiako ahatongavana anie dia izao e. Rehefa tsy fantatra aloha ny tena marina dia izay eken'ny rehetra ho marina no ekena ho marina. Taloha a, nolazaina fa fisaka ny tany, nandeha sens unique irery Galilé nilaza fa biribory no tena endriny, dia nohelohina fa hoe mampiditra zavatra tsy marina, ankehitriny anefa manaiky ny rehetra fa marina ilay izy. Ka asa aloha e, sao dia mba ny ahy no........ (doute philososophique ihany iny e)
Fa ilay ohabolana vaovao kosa aloha tsy ratsy a. Raha misy vote dia tena hanao " eny" aho.
DotMG - 23/03/2017 09:13
Rehefa tsy fantatra aloha ny tena marina dia izay eken'ny rehetra ho marina no ekena ho marina.
Nolazaina ho olona adala mihitsy ilay nanambara fa boribory ny tany, satria namoron-kevi-baovao izay manohitra ilay efa nekena ho marina. Nisy rangahy atao hoe Jesoa koa nitondra fampianarana ara-pivavahana vaovao teo amin'ny Jiosy ary notoherina sy notondroina ho mpanao fampianaran-diso. Ireny "adala" ireny dia neken'ny tantara ho hendry ihany taty aoriana, fa tamin'ny fotoana nahasahiany nandeha irery nanohitra ny maro dia "olona adala" izy teo imason'ny fiarahamonina.
"Cas possible" hoe miara-diso ny maro mitovy hevitra fa ilay iray maningana no manana ny marina.
Fa raha iverenana ity ohabolana hoe basy atifi-kavana ity, dia fampiasa rehefa hiteny zavatra mivantana amin'ny endrika mibedy na manome tsiny tsy miolakolaka amin'ny olona hajaina sy tiana izy ity. Tsy any amin'ny endrika hamono na handratra ny tanjon'ilay miteny fa ny hanitsy, ary izay no tiana hasongadina amin'ilay hoe "havana". Tadidio indrindra ihany koa fa ny teny hoe basy any amin'ny faritra sasany dia midika hoe "teny, resaka, hevitra". (Ento ny basinao, na koa hoe izay basinao basinao). Azo heverina ho manao kilalaon-teny ny ohabolana eto mampifangaro ny basy fitifirana sy ny hevitra aposaka izay toa mitifitra ihany koa.
Rehefa miteny mivantana tokoa isika, mananatra na manakiana, dia mety horaisin'ilay tenenina ho fankahalana na fanaratsiana tsy amin'antony izany, ka indraindray ilàna fitandremana milaza mialoha hoe "ho mafimafy ny teny haloaky ny vavako ity, kanefa havako ianao fa tsy haza sanatria, tsy hamono na handratra anao no tanjoko fa havako tiako ianao, ary fantatro ihany koa fa mandray ahy ho havanao sy matoky ahy, koa dia sahy aho milaza mahitsy aminao izay ato am-poko!" Tsy ilaiko atao an-kinafinafina na an-kifonofono ny teniko fa sahiko lazaina mahitsy
Raha ohabolana hoentina milaza faniriana hamono sy handratra olona izay tena kendrena fatratra kosa, ary olona tsy mahalala izay hahafaty azy toy ny haza tsy mahalala basy ilay "hotifirina", dia mitombina ilay hoe basy atifi-kaza.
DotMG - 23/03/2017 09:23
Rehefa miteny mahitsy toy izay ihany koa, ka tsy te hiolikolika sy tsy hihatsaravelatsihy, kanefa tsy miraharaha izay ho fiantraikan'ilay teny fa ny miteny mahitsy no zava-dehibe, dia fampiasan'ny olona ihany koa io ohabolana io.
Na rehefa hamely mihitsy aza, kanefa tsy mihatsaravelatsihy fa manao izay atao imaso imaso, dia miasa ihany koa io ohabolana io.
RKjeanclaude - 23/03/2017 09:27
Ekena e. Tena manaiky aho fa misy tsy azoko kely fotsiny sisa, lazainao fa samy marina ihany ilay izy... Mba hazavao kely kokoa hoe rahoviana aho mampiasa an'itsy ary rahoviana no itsy,...Dia fa maninona ilay noheritreretiko no tsy mba nisy nampiasa mihitsy hatrizay?
Dia ity toa diso e:"sanatria ny vava ladian'ny lela " sao dia mba izao no izy:"sanatria ny vava, fadian'ny lela". Fomban'ny Gasy mantsy no manao laza masaka, toy ny hoe "miala tsiny, miala fondro", miarahaba , salanitra" sns....
DotMG - 23/03/2017 09:39
Angamba tsy misy olona hamely olona iray izay sady bonaika tsy mahalala izay hahafaty azy (toy ny haza) ka mbola hirehareha ihany koa hoe ialahy na vendrana tsy mahay izay hahavoa an'ialahy aza dia asiako sady ampahafantariko mihitsy koa hoe asiako. Ny tiako tenenina dia ilay hoe manararaotra ny havendranan'ilay asiana sady mirehareha noho izay fanararaotana ny fahalemeny izay, mety vitsy ihany no hanao an'izay fanararaotana izany ho zavatra mendrika hireharehana.
Raha fintinina ireo hevitro teo ambony ireo (torolalana ny ahy sy fandinihana ny tranga ampiasan'ny olona an'ilay ohabolana, fa tsy itompoako teny fantatra), dia hoe rehefa hanao zavatra mahitsy sy imaso imaso no hampiasana an'ity ohabolana ity hoe basy atifi-kavana, tsy asoko fa arangaranga.
"Sanatrian'ny vava ladian'ny lela". Tsy diso io fa mandady ao anaty vava ao ny lela.
"Sanatrian'ny vava, fadian'ny lela". Tsy tokony ho diso koa io hevitra iray io.
Afaka samy raisina ho marina ireo, fa ny tsy tokony hataontsika taranaka aty aoriana fotsiny dia ny mandiso ny anankiray ary mametraka ny anankiray hafa ho hany tokana marina, raha tsy hoe tena hita sy iaraha-manaiky angaha fa tena diso dia diso tokoa ilay nahazatra.
RKjeanclaude - 23/03/2017 09:59
Hoy ianao hoe azo ovaina rehefa hita fa tena diso. Iza no manambara sy manaporofo fa tena diso tokoa ilay disa? Iza iza no nanaporofo sy nanao fanambarana fa diso tokoa ilay " foza lahy atakalo foza vavy" fa ilay "fon-jazalahy...", iny, hono no marina. Nefa angaha nisy nahafantatra izay nahatonga io " foza lahy..." io!?
DotMG - 23/03/2017 16:10
Iza no manambara sy manaporofo fa tena diso tokoa ilay diso?
Mpikaroka izay afaka maneho soratra na rakitra antitra kokoa noho ny an'ireo mpikaroka hafa ary ahitana fa ny tato aoriana no diso. Na raha toy ny an'ilay maha-boribory ny tany dia fanazavana maharesy lahatra ny rehetra ary tsy azo lavina ka mampihaiky na iza na iza hoe tena izay tokoa no marina.
Fozalahy atakalo fozavavy, hevitra taty aorian'ny 2009 no milaza fa diso izany, satria nanomboka teo dia fanafohezana ny fozaorana ilay teny hoe foza, ary entina mandraby sy manavakava-bolon-koditra sy manambany fironana politika anankiray ny hoe foza nanomboka teo.
Toy izao ny ohabolana mahakasika an'io foza io tany aloha :
Fozalahy atakalo fozavavy : amoizan-java-tsy foy hananan-tiana.
Fozalahy natakalo fozavavy : izy no ahy fa ny ahy lasany.
Ny heviny dia hoe ny fianakaviana iray mahafoy ny zanaka tsy foiny ho lasan'ny fianakaviana hafa, kanefa mahazo zanaka vaovao izay toa takalon'ilay azy. Tsy toy ny varotra ny fanambadiana arak'izany ka misy mahazo tombony, fa takalo tsy mahafaty antoka.
Fozakely anaty lavaka : Halorina tsy azo, topazan-drano tsy mivoaka, fa ao anaty lavaka ihany no manaingaainga tanana.
Ilazana sipakely mampifilafila io.
Foza halahala: tsy an-davaka tsy am-bolonkotona.
Io ilazana sipakely te hojerena, hita atsy hita aroa.
Io ilazana sipa maivana.
Ohabolana sy oha-pitenenana telo samihafa ireo, samy foza no atao sarin-teny ilazàna ny zazavavy tanora efa eo amin'ny taonan'ny hifankatia. Dia vao mainka izany manamafy fa fozavavy tokoa no izy.